बिजु सुवेदी (विजय) | मझेरी डट कम
Biju Subedi — Tue, 10/27/2020 - 09:23
मार्मिक भोगाइ ज्यै पढ्न चाहिने त हो नि
मनभित्र त्यै शिक्षा गढ्न चाहिने त हो नि
कत्ति हसुर्छौ ए ! आफन्त हामीलाई नटेरी
मर्दा त्यै २ वित्ता डढ्न चाहिने त हो नि
उधुम बत्ती बालेको सुनहीरा जडेर के गर्ने
लाज ढाक्न त्यै २ सरो, धर्न चाहिने त हो नि
परोपकार, पुन्य हो कर्म गर परपीडा हर्ने
यसैले त्यै २“आत्मा..शरीर” तर्न पाइने त हो नि
२०७७ कात्तिक ११
नमात्तिऊ ... गजल
Biju Subedi — Mon, 10/26/2020 - 21:51
पाप कराउँछ नबर्बराऊ धुरी..धुरी ।
अन्न थुपारी नभराऊ मुरी..मुरी ।।
गरीवले पनि श्रमले खान पाउनुपर्छ
भोको पेटमा नचलाऊ छुरी..छुरी ।
आफु मात्रै मैमत्तीई डुक्रेर मोज नगर
भ्याट्ट होला नबढाऊ चुरी..फुरी ।
आउनेनै छ एकदिन सत्यको विजय
न्याय सल्काउन नबलाऊ हुरी..हुरी ।
इज्जत भनेको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो,
सभ्यता विर्सेर नभट्याऊ कुरी..कुरी ।
कोरोनाले गााज्यो जत्ति टाढियो त्यत्ति सुरक्षित,
मनमुटु गाढा पार्न ल बढाऊ दूरी..दूरी ।
२०७७ कात्तिक १०
गजल : सत्ता फेरिएन
Biju Subedi — Wed, 10/21/2020 - 22:47
गथ्र्यो पञ्चायतले शोषणको सास्ती उधूम !
आँधी झैँ उर्लिन्थ्यो पहिले तानाशाही हुकुम !
क्रान्ति भयो रे तर पाउ यत्ति सारो मल्नु पर्ने कि
भन्दैछन् सबै रैती बनी “को पहिले भुकुम ?”
बोतल फरक रक्सी उही, भन्नैपर्ने सरकार ! अझै
फरमान आउने ठाउँ भयो अब रोल्पारुकुम ।
जताततै भयो राजनीतिको दुर्गन्धित फोहोरी खेल
खोजिरहेछु वुद्धको देशमा “खै कहाँ छ कुसुम ?”
घरको चेलीबेटी नै असुरक्षित हुन थालेपछि
लाग्छ भाला खुँडो लिएर रातभरि ढुकुम ।
२०२० अक्टोबर २१
Biju Subedi — Thu, 09/17/2020 - 15:27
मझेरी अनि नेटका भरी मेरा छन् विचार,
खुल्लम खुल्ला आँकेको मैले शिक्षाको प्रचार ।
निःशुल्क पढ्न सबैका लागि मेरा छन् किताब,
छैन नि कतै भलाइ गर्दा पाइने खिताब ।
तैपनि भीत्रै छुनाले गर्दा गरेको लेखनी,
पढ्नू न सबै उर्जाका लागि जसरी जेगरी ।।
Biju Subedi — Tue, 09/15/2020 - 00:38
चोचो घस्नेको मारामार भो ।
टाटपल्टो जिन्दगी कारागार भो ।।
डाक्टर भन्ने के थाहा पायौ,
पानी सुद्ध बाराबार भो ।
६ महिना भो लकडाउन, निषेधाज्ञा,
राशन छैन हाहाकार भो ।
घरबेटीले पिछा गर्या गर्यै छ ,
आश्वासनले टाराटार भो ।
अफिसको समान केही काम आएन,
सस्तो भाडामा सारासार भो ।
Biju Subedi — Sat, 07/18/2020 - 19:43
हाम्रो नाता टुटे पनि टुटुन्
डबल पार्टी फुटे पनि फुटुन्
देश र जनता न्यायको पक्षमा,
कहिल्यै नछुट्टिने गरी जुटुन्